सर्वश्रेष्ठ 24 ड्रैगन टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि 24 ड्रैगन टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo जुलाई 19, 2016
मानव जाति सधैं ड्रेगन पृथ्वी र उनको पछि उनको मिथक बाटो संग फैलाइएको छ। यी पौराणिक रचनाहरू वर्षौंमा लोकप्रिय भएको छ कि मानिसहरू अहिले उनीहरूको ट्याटुसको रूपमा प्रयोग गर्दैछन्।
ड्रैगन टटुट अर्थ
यो ट्याटको अर्थ के हो? #Dragon टैटू को लागि धेरै मान्छे को फरक अर्थ छ। तथापि, इज्जत ट्याट डिजाइनले राम्रो समाचार, किस्मत, सुरक्षा र समृद्धिको अर्थ हो। त्यहाँ जादुई, बुद्धि, योद्धा, लोभ, शक्ति, प्रजनन, ड्यूटी, बुद्धि, बल, फोकस, आध्यात्मिकता, आनन्द र धेरै अन्य अर्थ जस्ता अन्य अर्थहरू छन्।
त्यहाँ केहि टैटूहरू छन् जुन तपाईं रोक्न चाहानुहुन्छ र तिनीहरूको अर्थको लागि माग गर्न चाहानुहुन्छ। यस्तो टैटू मध्ये एक ड्रैगन # ट्याटू हो जुन विविधता र शैलियों मा आउँछ। ड्रेगन अर्थ मा विभिन्न आकृतिहरुमा आउछ जब शरीर मा हस्ताक्षर गरेर रहछन। केही मानिसहरू पनि आफ्नो ड्रैगन टैटूमा रङहरू थप्नका लागि यसलाई असाधारण र उनीहरूको स्वादमा अनुकूलित बनाउन। यो टैटू शरीर को कुनै पनि भाग मा राखन सकिन्छ र यो अझै पनि कहानी को बताना हुनेछ कि यो मतलब छ। टैटूको महत्व र अर्थ भनेको के हो जुन धेरै व्यक्तिहरूलाई यसले राम्रो टैटूलाई प्रेम गर्दछ।
यो पनि बल र बुद्धि को प्रतीक हो। केही मानिसहरू यसलाई यसलाई लोभी र खराब अजनको रूपमा लिन्छन्। ड्रैगनले चीनको बुद्धि, शुभकामना र भलाइको रुपमा चिनियाँलाई बुझाउँछ। जापानबाट ती मानिसहरूका लागि, उनीहरूले सोचेका छन् कि अजगरको सन्तुलन हो। मुकुट र सिंथनका साथ प्राय: काल्टिक ड्रैगन शक्ति र शक्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हामीले तिनीहरूलाई देख्नका लागि तिनीहरूको पुरातात्विक चित्रहरु को चित्रण गर्न को लागी हामी तिनीहरूलाई गुफाहरु को अंदर तैयार गरेको छ। छवि स्रोत
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई ड्रैगन टटू जित्नुहुन्छ, के तपाईं स्याङ्किङ्ग स्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईं एक ड्रैगन ट्याटू को प्रयोग गर्न सक्नु अघि केहि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। छवि स्रोत
एक ड्रैगन # वर्णन को अर्थ केहि हुनेछ जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नु अघि तपाईलाई वास्तवमा बुझ्न आवश्यक छ। छवि स्रोत
तपाईं आफ्नो ड्रैगन डिजाईन अनुकूलित गर्न चाहानुहुन्छ जसको तपाईं तिनीहरूलाई चाहानुहुन्छ। रङहरू, संख्याहरू र आकारहरू पनि यी चीज हुन् जुन तपाईंले यी प्यारा टैटूहरू प्रयोग गर्नु अघि बुझ्न आवश्यक छ। छवि स्रोत
ड्रैगन टैटूहरूको सुन्दरता विशिष्टता हो जुन तिनीहरूलाई संलग्न गरिएको छ। संसारभरको, हामी ड्रेगनको फरक अर्थ छौँ किनकि तपाइँ आफ्नो छालामा स्याउ सक्नु अघि आफ्नो ड्रैगन र स्थानको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। छवि स्रोत
ड्रेगनहरूलाई धेरै शक्तिशाली जनावरहरू मानिन्छ जुन कमाउन सकिन्छ। छवि स्रोत
यद्यपि, यदि तपाईं चीनमा हुनुहुन्छ वा जापानमा पनि यी प्राणीहरू शक्तिशाली र अनुकूल हुन जान्छन्। यसले सम्राटहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र भाग्य र शुभकामनालाई बुझ्न सक्छ। छवि स्रोत
ट्याटोहरू चीन र जापानमा उत्साहित र खुसीसाथ मूड चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईं पश्चिमबाट हुनुहुन्छ भने, नकारात्मक ऊर्जा, अत्याचार र लुगा लगाउनुको फल देखाउन ड्रेगनहरू ज्ञात छन्। छवि स्रोत
धेरै मानिसहरू ड्रेगनहरूको लागि जान्छन् किनभने तिनीहरू देखाउन चाहन्छन कि उनी धेरै शक्तिशाली हुन्छन्। छवि स्रोत
यी ड्रैगन टैटूहरू ड्राइंग गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् जुन उनीहरूको सास आगो बनाउन, डरलाग्दो र विशाल वा अनुकूल पनि। यो सबै निर्भर गर्दछ कि तपाईं के गर्न चाहानुहुन्छ। छवि स्रोत
तपाईंले प्रयोग गर्नुपर्ने शरीरको भाग पुरा तरिकाले विचार गरिनुपर्दछ किनभने यो तपाईंको टैटू हुने कति सानो वा विशाल निर्धारण गर्न जाँदैछ। तपाईं ती प्राणीहरू सेतो हुन सक्नु हुन्छ जब तपाईं ती ब्याकमा राख्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो शरीरमा ठूलो ड्रैगन ट्याट्ट गरेर आफ्नो छवि पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
महिलाहरु या जो केहि राम्रो हुन सक्छ को लागि, उनको ड्रैगन मध्यम आकार हुन सक्छ। यदि तपाईं एक सानो ड्रैगन हुन सोचिरहेका हुनुहुन्छ भने, तपाईं ड्रैगन को एक भाग को लागि जान पर्छ। यो तपाईंको थम्बनेल, टंक वा हातको पनि छेउमा केहि गर्न सक्दछ। छवि स्रोत
भित्री पछाडि केही चित्रहरू पनि आउँदा पूर्ण पछाडि पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। छवि स्रोत
ड्रेगनहरू विङ् वा भिजलेसको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन ड्रैगन जस्तै स्वर्ग, बादल वा समुद्रसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। छवि स्रोत
जब तपाईं पश्चिममा हुनुहुन्छ, केही मानिसहरूले यसको बारेमा खतरनाक प्राणीको रूपमा सोच्न सक्छन्। तथापि, राम्रो भाग्य, धन, शक्ति, दया, स्वतन्त्रता र शक्ति प्रतीक गर्न ड्रेगनहरू ज्ञात छन्। छवि स्रोत
जो ड्रेगन संग राम्रो किस्मत को सहभागिता यो एक पानी प्रतीक को रूप मा देख्छ कि क्लाउड, नदियों, झीलों या देखे जान्छ जब वर्षा हुन्छ जब मा चढ्छ। यो बलियो मानिन्छ कि पानी चावलको खेतीको कारण चीन र जापानमा ठूलो भूमिका खेल्छ। छवि स्रोत
आज, तपाईं टैटू को उपयोग गर्न र सार्वजनिक मा खडा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै विशेष कारणहरू छन् कि मानिसहरू यो विशेष टैटूको लागि जान्छन्। तपाईंले यो प्यारा टैटू मसी गर्न सक्नु अघि तपाई जापान वा चीनबाट आवश्यक हुँदैन। छवि स्रोत
तपाईलाई चाहिन्छ कि एक राम्रो कलाकार हो जसले तपाईंको शरीरको कुनै पनि भागमा केहि उत्तम ड्रेगनहरू आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ। आधुनिक दिन टैटू कलाकारहरूले अर्को स्तरमा ड्रैगन ट्याट्ट लिइरहेछन्। यसले तपाइँलाई चाहानुहुने डिजाइनको कुनै फरक पर्दैन, तिनीहरू तपाईंलाई प्रदान गर्न तयार छन् कि अविश्वसनीय टटू तपाई प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्न। छवि स्रोत
पूर्ण अजगर डिजाइन शरीरको पछाडिको जाँच गर्न सकिन्छ। यस संसारमा कुनै पनि भाग हो जहाँ यो डिजाइन देखिएन। छवि स्रोत
वास्तवमा, तपाईं यस ड्रेगनलाई हातमा माया गर्नुहुनेछ। पुरुष र महिलाहरु लाई सार्वजनिक मा उभिएर पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईले के भन्नुहुन्छ? छवि स्रोत
जब तपाई ड्रैगन टटूको साथ फरक बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यस डिजाइन हुनसक्छ तपाईलाई साँच्चै चाहिन्छ। छवि स्रोत
यो ड्रैगन टैटू ड्राइएको बाटोले यो महिलाहरु को लागि मनपर्ने मध्ये एक बनाउँछ। यो सुन्दर र धेरै सेक्सी छ। छवि स्रोत
टैग:ड्रैगन टैटू ट्याटुहरू केटीहरूको लागि पुरुषहरूको लागि टैटू
टखने टैटूपैट टैटूतीर टटूआँखा टटूबिल्ली ट्याटोफूल टैटूहरूपक्षी टैटूहरूअनन्तता टटूबिस्कुट टटूएंकर टैटूहरूतितली टैटूहरूmehndi डिजाइनकम्पास टैटूFeather Tattoowatercolor टटूचेरी खिलौना टैटूगर्दन टैटूहरूईगल ट्याटोसंगीत टैटूहरूछाती टैटूहरूबहिनी टैटूहरूहात ट्याटोसयुगल टैटूहरूसिंह टटटोहरूकमल फूल टटूहात टाटाटोससूर्य टैटूहरूहृदय टटटोपुरुषहरूको लागि टैटूक्राउन टैटूहरूज्यामितीय ट्याटुहरूगुलाब टैटूहरूटैटू विचारहरूआदिवासी टैटूहरूkoi fish tattooहात्ती टटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूहीरे टैटूरिप टैटूआस्तीन टैटूहरूप्यारा टैटूहरूहेनना टैटूक्रस टैटूप्यार टैटूफिर्ता ट्याटोहरूओटोपस ट्याटूट्याटुहरू केटीहरूको लागिचन्द्र टोटोटोसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूदूत टैटू